imithetho ubudlelwane kunye yakho Isitshayina umfazi Asian Icacile mini Hetalia
Kwi-China, ekubeni olomeleleyo unxibelelwano kwi budlelwane kulindeleke kwaye yinto eqhelekileyo kuba partners ukuthetha kulo lonke mini. Oku kunokuthetha kuwe exchange rhoqo imiyalezo kunye yakho Isitshayina wasetyhini kwaye kanjalo biza yakhe a ezimbalwa phinda-phinda ngo-mhla. Musa kuba surprised ukuba umlingane wakho wagqitywa amaxesha aliqela ekuseni yedwa.
A Isitshayina umfazi uza silindele kuye umntu ukuba abe isigqibo umenzi kwi-budlelwane. Kwakhona, oku tradition yayo homeland, kwaye ngoko ke, xa ndihamba ngaphandle kumhla kuba ucacile icebo apho uza kuhamba, kwaye oko uza kukwenza. Ukuba umlingane wakho ingaba ikhona izimvo kuwe, ngoko ke kufuneka malunga nabo kunjalo, kodwa rhoqo kuba ilungile ukwenza ezo iqhosha izigqibo. Traditionally kwi-China, ekubeni intimate ngaphambi kokutshata ngu highly uncommon.
Nangona kunjalo, urbanized imimandla yelizwe, lento ukutshintsha
Nangeyiphina indlela, xa ufuna intimate neqabane lakho Isitshayina umfazi xa dating, uyakwazi kuphumla assured ukuba yena ubona yakho kubudlelwane njengendoda ezinzima omnye. Iqinisiwe ngo ngasentla umthetho, ke okulungileyo ukwazi ukuba kwi-China, umtshato kakhulu kakhulu injongo. A Isitshayina umfazi uza kuba ugxininiso olumandla kwi-mtshato, kwaye ukuba ukhe ubene intimate ngexesha dating, ngoko ke umlingane wakho uza uninzi ngokuqinisekileyo cinga umtshato ube kwi amakhadi. A Isitshayina umfazi uza kusenokwenzeka ukuba zibe ngaphezulu attracted ukuba abantu ukuba kuba solid wesiqalo.
Ngokuthi oku, siza kuthetha ukuba uya kufumana umsebenzi, indlu imoto
Njengokuba tradition kwi-China, kwi imihla a Isitshayina umfazi uya rhoqo kuzisa umhlobo kunye yakhe, ngokuqinisekileyo ukuba yokuqala embalwa iintlanganiso kunye umntu. Oku reassurance nto kwaye sethutyana ngelixa yena efumana ukwazi umntu kakuhle. Ngoko ke, musa thabathani njengoko na khetha ka-isithuko yakho elonyuliweyo izisa umhlobo kunye naye. Ngexesha thetha sele kuba kancinci cheap Entshona ihlabathi, lento ngokuqinisekileyo, hayi ityala kwi-China. Ukuba yakho Isitshayina umfazi ikuxelela ukuba yena uthanda, iimphoso: okanye ngenene likes kwenu, gqala oku kuba okwenene, intetho yakhe admiration kuba kuni.
Isitshayina abafazi musa ukuyisebenzisa le ulwimi lightly
Lo ngumzekelo incredibly ebalulekileyo umthetho xa kwi ubudlelwane kunye Isitshayina umfazi. Ukuba ufaka ezinzima malunga elide ubudlelwane kunye kwezo meko kuba umtshato, umlingane wakho kufuneka bazi oku. Mhlawumbi ngaphezu okubalulekileyo kukuba, ukuba ukhe ubene kuphela emva causal budlelwane ne-physical intimacy, kufuneka wenze oku cacisa phambi kwexesha ngomhla. Omnye-busuku kumi ingaba rare kunye ezininzi Isitshayina abafazi, ngoko ke, qiniseka ukuba siyazi into kufuneka engqondweni ukusuka i ekuqaleni kwethuba. Ukuba yakho Isitshayina umfazi ingaba wakhe waxelela abazali malunga nani, ngoko uyakwazi kuba ezithile ukuze yena ubona yakho kubudlelwane njengoko ezinzima kakhulu. A Isitshayina umfazi uza kuphela angenise indoda wakhe abazali ukuba umtshato ephiwe amakhadi. Ke ngoko, ukuba uya musa khangela yakho kubudlelwane isihloko ngakulo ekuthetheni, umele ukuphephe intlanganiso yayo abazali
← Kuhlangana kuthi ngomhla Alaphukanga Bridge kwiminyaka: Isitshayina kubekho inkqubela yamkelwa libhunga Americans reunites kunye neziphene abazali, China News - e-Asia Omnye
China Bust Incoko Amagumbi Ngaphandle Yobhaliso →